गृहपृष्ठ » धर्म/संस्कृती » आर्थिक राशिफल : यी राशिलाई आर्थिक लाभ, आफ्नो राशिको अवस्था जान्नुहोस् -२०७८ पुस २७ गते, मंगलवार
मङ्गलबार २७ पुस, २०७८
२०७८ पुस २७ गते, मंगलवार, ११ जनवरी २०२२। पौष शुक्लपक्ष नवमी तिथि, १७ः१५ बजेदेखि दशमी। अश्विनी नक्षत्र, १४ः२५ बजेदेखि भरणी। चन्द्रराशि– मेष।
मेष – लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ । ठुलो लाभ मिल्नेछ । चारैतिर सफलताको संकेत देखिन्छ । नयाँ व्यक्तिबाट सहयोग मिल्नेछ । शुभको संचार हुनेछ। महत्वपूर्ण निर्णय लिन सकिनेछ । काम अलपत्र नराख्नुहोस्। चलाखीपूर्वक समाधान खोज्नेछ।
वृष – व्यापार व्यवसाय बलियो रहनेछ । प्रतियोगितामा राम्रो गर्नुहुनेछ । लक्ष्यमा फोकस राख्नुहोस्। व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनेछ। काममा बल मिल्नेछ। नियमको पालना गर्नेछ । बजेट बनाऔं । खर्च बढ्नेछ।
मिथुन – भाग्य बलियो रहनेछ। पेशा व्यवसायमा उत्साह रहनेछ। महत्वपूर्ण काममा सक्रियता रहनेछ । व्यवस्थापन कार्यमा सहजता रहनेछ। व्यापारमा राम्रो हुनेछ । सौभाग्य बढ्नेछ।
कर्कट – धन सम्पत्तिमा वृद्धि हुनेछ । पुरस्कृत गर्न सकिन्छ। सफलताको प्रतिशतमा सुधार हुनेछ। आर्थिक मामिलामा शुभफल रहनेछ। धैर्यतापूर्वक काम हुनेछ। व्यावसायिकता रहनेछ । दिनचर्या राम्रो राख्नुहोस्।
सिंह – आर्थिक अवसर बढ्नेछ। योजनामा ​​गतिविधि हुनेछन्। लगनशीलता बढ्नेछ। स्थिरता सुदृढ हुनेछ। महत्वपूर्ण कुराहरु पक्षमा रहनेछन् । सद्भाव र साहसका साथ काम गर्नेछ।
अभिनेता अजय देवगन र काजोलकी छोरीका यी ४ तस्विरले बलिउड ततायो, अंग्रेजी केटा को हो ? [तस्विरसहित]
कक्षा १० मा पढ्दा नै होस्टलमा ४० जना केटाले दैनिक एब्यूज गरे !
विमानस्थलमा ठूलो ब्लाष्ट, यात्रुले भरिएको मुम्बई विमानस्थलमा ब्लाष्टपछि भीषण आगलागी
जनवरी १४ मा ठूलो घटना हुन गइरहेको छ, तपाईको राशि प्रभावित हुनेछ
माघ १५ सम्म विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमा के छ : अब के–के बन्द हुन्छ ?
कन्या – व्यक्तिगत लगानी र खर्च बढ्न सक्छ। जिम्मेवारी पूरा हुनेछ । व्यापार व्यवसाय सामान्य रहनेछ । योजनाहरूमा धैर्य राख्नुहोस्। स्मार्ट ढिलाइको नीति अपनाउनुहोस्। निरन्तरता होस् ।
तुला – सबैको सहयोग मिल्नेछ । योजनाहरूको कार्यान्वयनमा वृद्धि हुनेछ। द्रुत गतिमा अघि बढ्नेछ। जोखिमबाट बच्नुहोस्। नाफामा ध्यान दिनुहोस्। ब्यापार ब्यबसायमा गतिबिधि रहनेछ । उपलब्धिहरु बढ्नेछन् । लगानीमा रुचि बढ्नेछ ।
वृश्चिक – लाभ सामान्य रहनेछ । लगनशीलताका साथ कार्यस्थलमा स्थान बनाउनेछ । समय व्यवस्थापन गर्ने हो । लेनदेनमा थप सजग रहनुहोला । भ्रम र अफवाहमा नपर्नुहोस्। तार्किक सोच राख्नुहोस्।
धनु – धन सम्पत्तिमा वृद्धि हुनेछ । पेशा व्यवसायमा उपलब्धि बढ्नेछ। लाभ पक्षमा रहनेछ। महत्त्वपूर्ण योजनाले गति लिनेछ। काममा फोकस राख्नुहोस्।
मकर – काममा सक्रिय रहनेछ । राम्रो अफर प्राप्त हुनेछ। सामान्य भन्दा राम्रो लाभ हुनेछ। योजनाले गति लिनेछ। जिम्मेवार निकायको सहयोग रहनेछ । प्रशासनिक कार्य सम्पन्न हुनेछ ।
कुम्भ – व्यापारिक मामिलामा राम्रो हुनेछ। नाफा बढ्नेछ। योजनालाई गति दिनेछ। सक्रिय रूपमा काम गर्नुहोस्। काम व्यवसायमा अग्रता रहनेछ। प्रभाव बढ्नेछ। व्यवस्थापनमा सामेल हुनुहोस्।
मीन – आर्थिक मामिलामा सोचेभन्दा राम्रो काम हुनेछ। पेशा व्यवसाय किनारमा हुनेछ। योजनामा ​​ध्यान दिनेछ । दिनचर्या मिलाउनेछ। विवादबाट जोगिनेछ। व्यावसायिकता लाभदायक हुनेछ।
यी ११ राशिको चम्किनेछ भाग्य, १ राशिलाई संकट : राशिफल / ०७८ पुस १८ गते, आइतवार